H.E. U Kyaw Zeya Presents Credentials to Co-Prince of Andorra – Ministry of Foreign Affairs
H.E. U Kyaw Zeya Presents Credentials to Co-Prince of Andorra
U Kyaw Zeya, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Principality of Andorra, presented his Credentials to His Excellency Mons. Joan-Enric Vives Sicilia, Co-Prince of Andorra, on 13 March 2019 in Episcopal Palace.
Dated. 22 March 2019
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ဇေယျ အင်ဒိုရာနိုင်ငံ အကြီးအကဲထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
အင်ဒိုရာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ဇေယျသည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် အေပီစကိုပါလ် နန်းတော်၌ အင်ဒိုရာနိုင်ငံ အကြီးအကဲ မွန်စီယာ ဂျိုအမ်း အန်ရစ် ဗီဗက်စ် စစ်စီလီယာထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်